Qubanaha » Ciidanka Booliska oo qaatay Mishaaraadkoodii oo muddo aan la siinin.
Ciidanka Booliska oo qaatay Mishaaraadkoodii oo muddo aan la siinin.
Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay muddo siddeed bilood ah la siiyay mushaar iyadoo mushaarkaasina uu yahay kii ugu horeeyay ee ay bixiso dowlada tan iyo markii uu xafiiska Madaxweynaha la wareegay Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Mushaarka la siiyay ciidamada Booliska oo ah mid hal bil ayaa qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Booliska waxa ay sheegeen inay tahay tii ugu horeysay ee ay helaan muddo siddeed bilood ah.
Ciidamada Booliska ayaa mushaarkooda dhiiba dowlada Soomaaliya iyo Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan horumarinta barnaamijyada(UNDP),hase yeeshee mushaarka la siiyay ciidamada shalay oo ah hal bil ayaa ah kii ay dowlada Federalka siin jirtey.
“ Muddo siddeed bilood ah ayaan wax mushaar ah qaadan balse shalay waxaa na soo gaartay mushaarka bil ah taasoo aan ka helnay dowlada Federalka.”ayuu u sheegay mid ka mid ah ciidamada Booliska weriye ka tirsan jowhar.com.
Arrintan ayaa ah talaabadii ugu horeysay ee uu qaado Madaxweyne Farmaajo taasoo ah bixinta mushaaraadka ciidamada, waxana ay ku soo beegantay iyadoo shalay uu Madaxweyne Farmaajo kala hadlay safiirka u fadhiya Soomaliya dowlada Maraykanka sidii looga caawin lahaa dowlada Soomaaliya bixinta mushaaraadka ciidamada.
Si kasta ha ahaatee ciidamada xoogga dalka ama Milatariga ayaan iyaguna helin wax mushaar ah muddo gaareysa siddeed bilood,waxana ay ciidamada Milatariga ay si weyn u soo dhoweeyeen doorashada Madaxweyne Farmaajo.